शिवपुजन राय यादवको उम्मेदवारी आज टुंगो लाग्ने - SandeshBahak
देश फोटो फिचर
२० मंसिर २०७४, बुधबार ०६:१० December 6, 2017 Sandesh BahakLeaveaComment on शिवपुजन राय यादवको उम्मेदवारी आज टुंगो लाग्ने
काठमाडौं । सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४ का वाम गठबन्धनका उम्मेदवार शिवपुजन राय यादवको मनोनयन खारेज हुने कि नहुने भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले आज निर्णय गर्ने भएको छ ।
सर्वोच्चले निर्वाचन हुनु एकदिन अघि रायको उम्मेदवारी सम्बन्धमा छलफल गर्न निर्वाचन आयोगलाई बोलाएको छ । उनीमाथि कुटनीतिक राहदानी दुरुपयोगको आरोप छ ।
त्यसो त न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले उम्मेदवारी खारेजीको कारण पेस गर्न पनि निर्वाचन आयोगको नाममा आदेश जारी गरेको छ । निर्वाचनको १० दिन अघि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी खारेज गरेपछि यादवले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।
पहिलो संविधानसभामा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालबाट सभासद सदस्य रहेका यादव माअोवादी प्रवेश गरेर सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार छन् । निर्वाचन आयोगले राहदानी दुरुपयोगमा यादवलाई विषेश अदालतले दोषी ठहर गरेको भन्दै उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो । विषेश अदालतले यावदलाई चार महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना समेत तोकेको थियो ।
उनले आफ्नो राहदानीमा अन्य ब्यक्तिलाई विदेश पठाएको आरोपमा अख्तियारले विषेश अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । सरकारी कागजात किर्ते गरेको आरोप पनि यादवलाई लागेको छ ।
मंसिर १४ मा ५० स्थानमा उप-निर्वाचन हुँदै
१७ श्रावण २०७६, शुक्रबार २१:०९ August 2, 2019 Sandesh Bahak
पत्रकार पुडासैनीको आत्महत्या नै हो त ? एकचोटी यो भिडियो हेरौँ ।
२ भाद्र २०७६, सोमबार १९:३६ August 19, 2019 Sandesh Bahak
एक्लिदै गएका नेता नेपालको सात बुँदे `नोट अफ डिसेन्ट’ पढेर अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री पद नै छाड्लान् त ?
३ भाद्र २०७६, मंगलवार २०:१८ August 20, 2019 Sandesh Bahak